Sida Strava loogu Isticmaalo Jideynta iyo Jirdhiska: Noqo Strava Jedi - dieselboss
Sida Strava loogu Isticmaalo Jideynta iyo Jirdhiska: Noqo Strava Jedi
«Geedka markuu soo dhaco oo aan cidna maqlin, qaylo miyuu sameeyaa?» Rag iyo dumar wax garad ah ayaa su’aashan ka doodayey muddo sanado ah. Iyo darawalka casriga ah, halxiraalahani wuxuu helay muuqaal cusub: «Haddii aad raacday laakiin aadan ku duubin Strava, dhab ahaantii ma dhacday?»
Dhab ahaantii, Strava waxa uu ugu dhow yahay lama huraanka baaskiil wadaha casriga ah sida baaskiilkaaga. Haddaba sidee baad uga faa’iidaysan kartaa shaygan dhijitaalka ah ee yaabka leh? Tilaabo u qaado dhanka midig si aad u ogaato…
Sannadkii 2009 Strava waxa uu dhashay, baaskiil wadidana weligeed way is beddeshay. Tan iyo markaas, waxay ahayd raadraaca ciyaaraha tooska ah ee aduunka ugu caansan, oo ay wadaagaan malaayiin baaskiil wadayaal ah.
Sannadkii 2015 oo keliya, ku dhawaad ​​116 milyan oo soo jiidasho ayaa la raray in ka badan 4.1 bilyan oo kilomitir ayaa la ururiyay adduunka oo dhan.
Laakin inkasta oo badi dadka baaskiilka wata ay yaqaanaan goobta…
Entrada anteriorAnterior ▷▷ 2021 ▷ Altura de 21 salvajes
Entrada siguienteSiguiente Requisitos del sistema SPEDV – Requirementsfor1.com